helppane.exe UNcedo neNkxaso ka-Microsoft® – Windows files
No Comments on helppane.exe UNcedo neNkxaso ka-Microsoft®
I-helppane.exe yinkqubo engekho yenkqubo ekhoyo kwi-hard drive yekhompyutha kwaye ithwala ikhowudi yomshini.
Nangona iNkqubo yeMicrosoft yoNcedo neNkxaso ayiyiyo ifayile yenkqubo kwaye ayithathi inxaxheba ekusebenzeni kweNkqubo yokuSebenza, umntu akufanele akhiphe.
Ngokwemvelo, le nkqubo ayibonakali kuMphathi wezeMisebenzi kwaye iboniswe kuphela xa kuncedwa uncedo. Akufanele ifakwe njengeenkqubo eziyinxalenye yesicwangciso sakho sokuqalisa.
Ngokuqhelekileyo, ifayile yeHelpane.exe ikhona kwi C: \_ Windows ifolda. Oku kuthetha ukuba yifayile yaseMicrosoft yefayile kwaye ayifaki i-PC yakho nayiphi na ingozi. Nangona kunjalo, ukuba uyifumana kwenye indawo, qiniseka ukuba kuphinda ubhekisise ukuba ayinayo intsholongwane.
Ekugqibeleni, helppane.exe yi-Windows yangaphambili efakwe kwiWindows OS umsebenzi enxalenye yeNkonzo yeMicrosoft yeNkxaso nenkxaso kunye neenkonzo zoncedo.
Kwi-Winx64 system helppane.exe ingaziwa njengehelppane.exe UNcedo neNkxaso ka-Microsoft® (32-bhithi)
Ezinye iingxaki onokuzidibana nazo
Awunxibelelananga kuNcedo lweintanethi. Ukuze ufumane uNcedo olukwi-intanethi, olukubonisa isiqulatho soncedo, kufuneka uqhagamshelane kwi-Intanethi Jonga uqhagamshelwano lwakho lweIntanethi.Ukuba usawubona lo myalezo, isevisi yoNcedo lweintanethi lunokungafumaneki okwexeshana. Zama ukuqhagamshelana kwakhona kamva.
Awuqhagamshelananga kuNcedo olukwi-intanethi, apho isiqulatho soncedo sakutshanje sifumaneka khona. Fumana uNcedo olukwi-intanethi ngoku.
Uncedo olukwi-intanethi alufumaneki ngolwimi olusebenzisayo. Ukuze ubone isiqulatho soncedo, unako ukufumana uNcedo olukwi-intanethi kwi %1.
Uncedo neNkxaso alunakuvula ngenxa yokuba i-Windows Update ifakela okanye ikhupha ufakelo lwesiqulatho sikaNceda.
Ungaqalisa uNceda kwakhona xa lugqityiwe uhlaziyo.
Tags helppane.exe, UNcedo neNkxaso ka-Microsoft®
← winlogon.exe Usetyenziso lokuvula ii-Windows